कुम्भकर्ण जसरी सुतेको सेबोन एक्कासी ब्युँझिएर आठ रेक्टरको भूकम्प ल्यायोः रौनियार| Corporate Nepal
असार १, २०७८ मंगलबार १९:१२
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आज (मंगलबार) गरेको एक्शनलाई स्वागत गर्न गाह्रो छ । बोर्डले सकारात्मक सोचले नै ५१ वटा कम्पनीमाथि कारवाही गरेको हुनसक्छ । तर अर्कोतर्फ हेर्दा पुँजी बजारमा यो हस्तक्षेप हो । किनभने पुँजी बजार त खुल्ला बजार हो । संसारमा कहीं पनि यसरी कारवाही हुँदैन् । कहीं नभएको जात्रा आज भयो ।
यो कस्तो भयो भने छ महिनासम्म कुम्भकर्ण जसरी सुत्यो सेबोन । एकैचोटी व्युँझिदा आठ रेक्टरको भूकम्प ल्याइदियो । यस्तो गर्दा पुँजी बजार संस्तो सेन्सेटिभ मार्केटमा तरङ्ग आएको छ । यसले लगानीकर्ता आतंकित हुन्छन् । विशेषगरी नयाँ र साना लगानीकर्ता । भोलि बजार के हुन्छ ? मेरो लगानी के हुन्छ ? भन्ने चिन्ता उनीहरूमा परेको छ ।
एकाउन्न वटा कम्पनीको नामै तोकेर कठघरामा राखेपछि ती कम्पनीहरूलाई भोलि सेबोनले कसरी न्याय दिन्छ । यदि गल्ती नै नगरेको कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो भने त उसलाई अन्याय नै हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई, लगानीकर्तालाई कस्ले दिने ?
यदि सेबोनलाई कसैले गलत गरिरहेको छ भन्ने लागेको थियो भने लाइभ ट्रेडिङमा बसेर हेर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा तत्कालै कारवाही गर्न सकिन्थ्यो । आफूले गर्नसक्ने र गर्न मिल्ने काम नगर्ने । बजारमा आतंक सिर्जना चाहीं गर्ने कुरा रहस्यपूर्ण छ । यो कतै ५१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटाएर फेरि कुनै स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको त होइन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
सेबोनको कारवाहीले गर्दा ५१ वटा कम्पनी बदमान भएको छ । त्यसमा लगानी गर्ने दशौं हजार लगानीकर्ता आतंकित बन्न पुगेका छन् । ठिक छ नियामकले नियामन गर्नैपर्छ । सँगसँगै उसले लगानीकर्ताको पनि हित रक्षा गर्नुपर्छ । के आजको सेबोनको कारवाहीले बजारमा चलखेल गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई असर गर्छ त ? गर्दैन् । साना लगानीकर्ता नै मारमा पर्ने हो । यसमाथि कम्पनीहरूलाई कारवाही कस्तो हुन्छ ? यसअघि विशाल बजार कम्पनीलाई कारवाही गरियो । उसकै सेयरमा सर्किट लाग्यो । खानीखोला जलविद्युत कम्पनीलाई कारवाही गरियो । त्यसैको सेयरमा सर्किट लाग्यो । यसले उत्तर दिइरहेको छ कि कारवाही गर्ने शैली ठिक छैन् ।
सेबोनले बरु एउटा मापदण्ड बनाएर छानविन र कारवाही अघि बढाएको भए हुन्थ्यो । लिष्ट नै बाहिर सार्वजनिक गर्दा त्यो राम्रो भएन् । कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारमा हुने चलखेल र कर्नरिङ गरेर फाइदा लिने कुरालाई रोक्ने, दोषीलाई प्रमाणका आधारमा तत्कालै दण्डित गर्ने कुरा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । हामीले त्यसको लागि आग्रह पनि गर्दै आएका छौं । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत आम लगानीकर्तालाई सचेत गराइरहेका छौं ।
भोलि (बुधबार)को बजार के हुन्छ भन्न सक्दिन । तर आजको कारवाहीको असर एक–दुई दिनमा सामान्य हुन्छ । किनभने अहिलेको बजार बुलिस ट्रेण्डमा छ । लाखौं लगानीकर्ता अहिले अनलाइनबाटै सोझै किनबेच गर्छन्, पहिलाको भन्दा धेरै अहिले बजार धेरै सिस्टमेटिक छ । धेरै कम्पनीको सेयर बढ्न नसकेर अझै पनि अण्डर भ्यालुमा छ । यस्तो बुलिस ट्रेडमा रहेको बजारलाई साना तिना कुराले खासै असर गर्दैन । मुल कुरा साना र नयाँ लगानीकर्ता आतंकित बन्न पुगे भन्ने मात्रै चिन्ता हो ।
रोनियारसँगको कुराकानीमा आधारित ।